သက်တန့်ချို: နန်းခင်ဇေယျာကို Miss Internet အတွက် တရားဝင်လင့်မှာ ကူညီချင်တယ်ဆိုရင်
Posted by သက်တန့်ချို at 4:02 PM
it's not Miss Internet, it's "Miss International". cheers!
ချိုးငှက် October 11, 2012 at 7:29 PM
ကူးသွားတယ်...အားလည်းပေးတယ်..သူမ အောင်မြင် ငါတို့အားလုံး အောင်မြင်တာနဲ့ အတူတူပဲ ကျေးဇူးနော်
ပုံမတွေ့တော့ဘူး ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရတော့မလဲ သိရင်ပြောကြပါ့ဦး
ှဲဇူလိုင် October 17, 2012 at 11:13 AM
အခု နန်းခင်ဇေယျာပုံ မတွေ့တော့ဘူး ။ ဘာမှားလို့လဲ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ။ ကိုယ်ပဲသုံးတာမှားနေတာလား ။ တခြား မယ်တွေပုံကိုတွေ့ပြီး မြန်မာပုံကိုမတွေ့တော့ဘူး
ချိုးငှက် October 17, 2012 at 2:59 PM
နန်းခင်ဇေယျာ ရဲ့ ဓာတ်ပုံ ပျောက်သွားတယ် ဘယ်လို မဲပေးရမလဲ ကူညီပါဦး...
sawnaung October 19, 2012 at 2:59 AM
ဘယ်လို ကူညီပြီးဆုယူတဲ့ နေ့ ဝတ်ဖို့ ဖိနပ်စီစဉ်ပေးနိုင်မလဲ သိပါရစေ